विगतका जनप्रतिनिधिले विगारेको नगरपालिका पुनःनिर्माण गर्छु - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
आवाज संवाददाता २४ बैशाख २०७४, आईतवार
उपमेयर पदका उम्मेद्वार
तपाईले भीमेश्वर नगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिनु भएको छ, तपाईको उम्मेद्वारी केका लागि हो ?
सम्वृद्ध भीमेश्वर नगरपालिका निर्माणका लागि । सनातन हिन्दु धार्मिक नगर निर्माण गर्नका लागि ।
सम्वृद्ध भीमेश्वर कसरी बन्छ ?
खासगरी नगर भीत्र रहेका जल, जमिन, जंगल, पर्यटकीय स्थान, उद्योग, फिल्मसिटी निर्माण, थामी जातीहरुको उद्गमस्थल राङराङथलीको विकासका साथमा अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरु दोलखा भीमेश्वर, महाङ्काल, कोटीहोम लगाएतको प्रचार प्रसार तथा यहाँ आउने धार्मिक पर्यटकहरुलाई आकर्षण पार्क निर्माण गर्दै नगर भीत्र रहेको श्रोत र साधनको बढी भन्दा बढी उपयोग गर्दै नागरिकलाई नगरमैत्री बनाउन सके नगर सम्बृद्ध बन्छ ।
तपाई पहिला मेयर उठ्ने चर्चा थियो पछि किन उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिनु भयो ?
सवै पार्टीले महिलाहरुलाई उपमेयरको पदमात्र दिएको कारण हाम्रो पार्टीले महिलालाई मेयर पदमा उठाउने निर्णग गर्यो र मलाई उपमेयरमा यो पार्टीको निर्णय भएकोले म पार्टी सिपाहीको हिसावले यसलाई स्विकार गर्नु जरुरी थियो । यसमा पार्टीले गम्भिर रुपमा सोचेको होला ।
उपमेयर जित्ने तपाईको आधार के हो ?
पहिलो कुरा त भीमेश्वर नगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा नगरवासीले पक्कै सोच्ने छन् । यो निर्वाचनमा पार्टी र हाम्रा भन्दा माथी उठेर कुसल, क्षमतावान, सामाजिक र राम्रा मान्छेलाई मतदान दिने वेला हो । यही नै मेरो चुनाव जित्ने आधार हो । अर्को कुरा भीमेश्वर नगरपालिकाको विकासका लागि भीमेश्वर नगरवासी आवश्यक छ । म संग चुनावी मैदानमा रहने केही साथी अन्य गाउँपालिकाको भएको कारण पनि भीमेश्वरवासीहरुले मतदान गर्दा विवेक पुर्याउनु हुनेछ । नगरवासीलाई नै मतदान गरेर विजयी गराउनु हुनेछ ।
उपमेयर भएपछि तपाई नगरपालिकालाई कस्तो बनाउनु हुन्छ ?
मैले भनिसकें अन्य नगरपालिकाको तुलनामा नमुना नगर वनाउने हो । जुन नगरवासीहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, ढल निकास, कालो पत्रे सडक र सडक वत्ती, विद्युत, सडक र सडक पेटी, दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा एकरुपता आवश्यक छ । दोलखालाई सांस्कृति पर्यटनको सहर, जिलूलाई कृषि पर्यटनको सहर, चरिकोटलाई पर्यटनको हव बनाउने मेरो योजना छ ।
अन्तमा तपाईको केही छ कि ?
विगतमा पनि यहाँ जनप्रतिनिधि थिए । तर तिनले राम्रो काम नगर्दा नगरपालिकाको स्वरुप बिग्रियो । यति सम्मकी नगरपालिका बनेको मेयर उपमेयरले घर बनाउँदा सडक मिच्दा नगरपालिकाले घर संरचना भत्काउनु पर्ने अवस्था आयो । अब आम मतदाताहरुले यस्ता कुरालाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता पार्टीका उम्मेद्वाहरुलाई भोट हालेर फेरि नगरपालिका बिगार्नु भन्दा स्वविवेक पु¥याएर गाई चिन्हमा मतदान गरी राम्रो नगरपालिका बनाउने अवसर प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।